Christmas အတွင်း Discount ချနေတဲ့ ဆိုင်များ - ဒိုးမယ်
ခရစ်စမတ်ရောက်ပြီဆိုတော့ discount တွေလည်း ချနေပြီနော်.. ခရစ်စမတ်ကာလအတွင်း ဘယ်ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေက ဘယ်လိုအမိုက်စား discount တွေနဲ့ စောင့်ကြိုနေလဲဆိုတာကို ဒိုးမယ်က ရှာထားဖွေထားတယ်။ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦး!
ခရစ်စမတ် discount ချနေတဲ့ စားသောက်ဆိုင်မိုက်မိုက်လေးတွေ
Discount ဆိုရင်တော့ အထွေအထူး ပြောစရာကိုမလိုဘူး၊ လူတိုင်း စိတ်ဝင်စားတာပဲ ဟုတ်တယ်မလား။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုပိတ်ရက်တွေမှာ ခရီးမသွားဘဲ ရန်ကုန်မှာလျှောက်သွားမဲ့ အစားတစ်လိုင်းတို့အတွက် ဒီလို ခရစ်စမတ် discount ချပေးနေတဲ့ ဆိုင်တွေနဲ့ဆိုရင် ကွက်တိပဲပေါ့။ ခရစ်စမတ်နေ့မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အုပ်စုလိုက်သွားပြီး ဝါးတီးဖွင့်ဖို့ အလွန်တန်နေတဲ့ဆိုင်တွေကတော့…
အောင်ရတနာဆေးရုံရဲ့ မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာရှိတဲ့ ဒီဆိုင်လေးကတော့ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ကစပြီး ခရစ်စမတ်နေ့အထိ ပရိုမိုးရှင်းချနေတာဆိုတော့ ကြာတော့ကြာပြီ။ ၅ ယောက်လာစားရင် 20% discount ရမှာ.. အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ဆိုပေမဲ့ စားသုံးချိန်က ၂ နာရီတောင်ပေးတာဆိုတော့ မဆိုးဘူးလေနော်။ ကဲ ခရစ်စမတ်နေ့က နောက်ဆုံးပဲမို့ လူစုပြီး မြန်မြန်သာ သွားလိုက်တော့!
သူကတော့ ခရစ်စမတ်ပါတီကိုလုပ်မှာ.. ခရစ်စမတ်နေ့ ညနေ ၄ နာရီကနေ ည ၉ နာရီအထိပါ။ လိပ်စာကတော့ ထန်းတပင်လမ်းနဲ့ အောင်ချမ်းသာ ၂ လမ်း ကြား၊ စံရိပ်ငြိမ် ဂမုန်းပွင့်အနီးပါတဲ့။ သူ့ပါတီမှာ ဘယ်ဆိုင်တွေပါလဲဆိုတော့ မာလာရှမ်းကောမှ မာလာရှမ်းကောဆိုတဲ့လူတွေအတွက် Mala Spice, နာမည်ကြီး Bubble Tea ဆိုင် Ocha, နောက်ပြီး Bonchon နဲ့ Pizza ချစ်သူတွေအတွက် Pezzo, အကင်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက် Best Choice ဆိုတဲ့ဆိုင်ရယ်၊ ဆူရှီကြိုက်တဲ့ဘေဘီတို့အတွက် Bento လည်းပါသေးတယ်။ သူ့ပရိုမိုးရှင်းက ဘယ်လိုလဲဆိုရင် ၄ ထောင်ဖိုးအထက် ဝယ်စားတာနဲ့ free coupon တစ်စောင်ရမယ်။ အဲ့ကူပွန်နဲ့ ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲပြန်ဖောက်ပေးမှာ။ ဘာတွေကိုဖောက်ပေးမလဲဆိုတော့ Happy lager(craft beer), Tuborg Beer, Pezzo Pizza နဲ့ Bread corner တွေတဲ့။
Hai Wei Xuan Hotpot
ဖွင့်ထားတာမကြာသေးတဲ့ ဒီဟော့ပေါ့ဆိုင်လေးက ဒီဇင်ဘာတစ်လလုံးအတွက် ပရိုမိုးရှင်းပေးနေတာနော်။ မနက် ၁၀ နာရီကနေ ညနေ ၄ နာရီအထိကို 50% discount နဲ့ ညနေ ၄ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီအထိကိုကျတော့ 30% discount တဲ့။ ပါရမီလမ်းမပေါ်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်၊ အေဒီမီးပွိုင့်နားပေါ့။ နေ့လည်ပိုင်းသွားစားပြီး 50% discount ဆိုတာနဲ့တင် တော်တော်ကြီးကိုတန်နေပြီလေ!